Ramgbọ ala Bayrampaşa Otogarı dị ọcha dịka ọ dị - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulBayrampaşa Bus Station Parking Lot
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, Foto, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
na-adọba ụgbọ ala bayrampasa dị ọcha ka ọ dị ugbu a
N'ikwekọ na mkpebi nke Metrolọ Ọrụ Nkwuputa Obodo Obodo nke Istanbul mere na nnọkọ ikpeazụ tupu ezumike ahụ, ọrụ ndị ahụ na-adọba ụgbọala nke Bayrampaşa Bus Station, bụ nke agafere na İSPARK, bịara na njedebe. Ewepuala ụlọ ochie ochie, ma dochie ndị ọhụrụ. Ndị otu İSTAÇ sachara ogige ntụrụndụ nke ọdụ ụgbọ ala, bụ nke a na-esighị esị. Ndi nchekwa na mpaghara aka site n’aka ndi LOVE na ndi otu ndi uwe ojii.
E kwubiri nkwekọrịta ebe a na-adọba ụgbọala n’etiti Istanbul Metropolitan Municipal (IMM) na International Anatolian na Thrace Busers Association na 5 May 2019. Na nnọkọ July ya, 11, IMM Assembly kwadoro ka a na-ebufe ebe a na-adọba ụgbọala na ISPARK nke onye enyemaka ime obodo. Gbaso usoro ikpe, a na-ebugharị usoro inyefe n’Ọgọst. N'okpuru ntuziaka onye isi Secretary General Yavuz Erkut, İSPARK, İSTAÇ, İSTGÜVEN na ndị otu uwe ojii nke obodo gara Bayrampaşa 8 July Martyrs Bus Station wee weghara ebe a na-adọba ụgbọala. Mgbe nnyefe a, a kwaturu ụlọ nke Eurasia Terminal Operations wee kwụsị ịnọchi oche nke İSPARK. Emebewo cab Cab dị ka nke taa.
Onye isi ala obodo isi obodo Ekrit İmamoğlu gara ọdụ ọdụ ụgbọ ala n'oge nleta ahụ, ndị otu İSTAÇ kpochara ebe ala ala na-adọba ụgbọala dị ala na nhazi dị mkpa. İSPARK ga-arụ ọrụ ebe a na-adọba ụgbọala ga-akwụ ụgwọ n'efu n'oge Eid al-Adha. N’aka nke ọzọ, ọnụọgụ mgbasa ozi bara ụba na-erute ụmụ amaala na ndị nnọchi anya İmamoğlu'na gosipụtara afọ ojuju ha na nnyefe nke ebe a na-adọba ụgbọala.
Nyefe Bayrampaşa Bus Station Parking Lot na İSPARK 09 / 08 / 2019 Ebufere ọdụ ụgbọ ala Bayrampaşa Station na ISPARK, otu n'ime ụlọ ọrụ IMM, na mkpebi Mgbakọ Assembly. N'oge usoro mbufe, Secretary General General Yavuz Erkut na ndị otu ya gbasoro ọrụ ahụ. Oge kwụsịrị na ọdụ ụgbọ ala Bayrampaşa taa. Nkwekọrịta nke ụlọ ọrụ ahụ, nke na-ejide ikike iji rụọ ọrụ na-adọba ụgbọala nke ọdụ ụgbọ ala ahụ, mezuru na May, na Metrolọ Ọrụ Nkwado Obodo nke Istanbul nyefere ebe a na-adọba ụgbọala nke busSPARK maka 5 afọ. Ka emechara usoro ikpe a, enyere ikike ịrụ ọrụ ebe a na-adọba ụgbọala nke ụgbọ ala ahụ n'aka İSPARK. IMAMOGLU, "THURSDAY'S OTOGARDAYAY" DEMİŞTİ İBB Onye isi Ekrem İmamoğlu'nun mere ndị otu mgbasa ozi na Tuesday, "Enwetara ikpeazụ ...
Sekaray enweghi igwe ugbua ka anyi ghara inye gi ahia n'enweghi uzo 22 / 01 / 2014 Sekaray Ọ dịghị Kaadị Ọ dịghị ndụ ọ bụla anyị ga-enye gị Tram: Ugbu a ọ bụ TRAMVAY ụgha? SEKARAY abụghị, ọ bụghị ụgbọ ala, anyị ga-enye gị tram! Mgbaghara na-adịghị edozi ... Anyị anaghị aga mgbe niile ịdee nsogbu dị mkpa ma ọ bụ ... Ka anyị gaa obere obere akpa! Ihe "tram" a ... Kwere m, anyị na-asọ oyi na mba niile. Ụmụ okorobịa, ọ na-ese anyị. Ejulala gi. Ọbụna anyị dabara n'asụsụ nke mgbasa ozi. Sir, ọ dị ka iwetara tram gaa n'obodo n'enweghị okporo ígwè, "na-ebute oké osimiri ahụ gaa Konya." Ọ bụrụ na mmadụ niile na-akwa anyị emo maka ụbọchị ole na ole, ọ bụ mpụ nke obodo ahụ! Ha kwuru na ha emeela otu ọnụ ọgụgụ tupu ntuli aka ikpeazụ. Ha na-anọdụ ala ruo afọ ise, ha nọ ọdụ n'ọnụ ụzọ ...
Na Metro Istanbul, Cleanest Metro, Na-edebe Mmanụ Dị Ọcha 30 / 01 / 2019 Njem 4 puku 800 n'otu ụbọchị, 2 ole nde ndị njem na-ekpochapụ nke metros? 844 ụgbọala nsoro na Istanbul Metro Istanbul mgbe niile na-anakwere ụkpụrụ nke na-enye àgwà ọrụ njem iji mezuo ha ihicha eme nhicha mkpara maka eme njem n'elu 100 na a ike na gburugburu ebe obibi. Ajụjụ banyere otú ịdị ọcha ọha na eze anyị na-eji kwa ụbọchị na-abata n'uche. Na ngwụsị nke njem ahụ na metro Istanbul, a na-akwadebe ụgbọ okporo ígwè ọha na eze maka ụbọchị na-esonụ ma otu n'ime ihe ndị a bụ nhicha. Site na njedebe nke njem ahụ, ụgbọ ala niile a na-akpọga na saịtị ndị dị na Se
Imamoğlu Bayrampaşa Esenler Bus Station weere: 'Ọ dịghị onye nwere ike ịbanye ebe a' 19 / 07 / 2019 İBB President Ekrem İmamoğlu, mgbe ọ nụsịrị nsogbu nke ndị nnọchiteanya na ndị ọrụ ụlọ ọrụ, gara na Bayrampaşa Bus Station, otu n'ime ọnyá ọbara nke obodo, na Mayor nke ógbè Atila Aydın. Imamoğlu, onye huru ala na-adighi nma karia n'elu ala di ala, kwuru, "Enweghi m obi iru ala, nwa m abanyeghi ebe a. arụ ọrụ, "ka o kwuru. Imamoglu, ndi oru nta akuko, ugbua ụgbọ ala wee juo uzo ole o ga - ewe iji gbanwee n'ime akuko, "Odi m abughi akwukwo nke oma. O doro anya na achoghi m inye oge ... Nke ato ...
Ebe a na-adọba ụgbọ ala Bayrampaşa Na-adọba ụgbọala ga-enwere onwe ya n'oge ememme 07 / 08 / 2019 N’ịkọwa na mkpebi akpachara anya banyere ebe a na-adọba ụgbọala nke Bayrampaşa Bus Station, akagbuola PresidentBB Onye isi ala Ekrem İmamoğlu kwuru: Imamoglu, n'oge mmemme nke ndị ikwu ma ọ bụ ndị njem na-ezukọ na Istanbul nyere ozi ọma na ogige ụgbọ ala ga-erite uru n'efu. Ekrem İmamoğlu kọwara na mkpebi nke ụnyaahụ e mere na ọdụ ụgbọ ala Bayrampaşa kwụsịrị taa site na ebumnuche nke IMM, wee kwuo, sị: “ternyaahụ, mkpebi ikpe na-eju m anya ma na-ewe m iwe. Mana taa, na ntinye aka anyị Obodo Obodo Istanbul, akagbuola mkpebi ịkwụsị ogbugbu a. E wepụrụ iwu ahụ. Onweghị ihe mgbochi ugbu a. Tọzdee na 16: 00…
Onye ụkọchukwu AK Party Kayseri bụ Yasar Karayel, Kayseri, nke ga-agbatị ụgbọ okporo ígwè dị elu, kwuru na enweghi nsogbu. 24 / 02 / 2012 Onye isi AK Kedu Kayseri Yasar Karayel, Kayseri kwuru na ọ dịghị nsogbu na ụgbọ okporo ígwè dị elu. Kayseri na nke na-ebelata okwu nke oge nke njem n'etiti Ankara na n'ihu nke na-arụ ọrụ na elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè oru ngo na-ekwu Yasar Karayel, "e nwekwara a mgbanwe na oru ngo n'etiti Ankara-Kırıkkale. Atumatu oru ngo a mgbe obi Yozgat na a ga-ẹkenịmde na akara auctions n'etiti Kayseri," ka o kwuru. Line Kayseri, kanye na e ọ bụla uko ke ụkwụ Southwind, "dị n'etiti Ankara-Yozgat mkpa ga-agwụ agwụ. Mgbe ahụ Kayseri ga-tendered ụkwụ," ka o kwuru. Isi: www.medya73.com
Ogige okporo ụzọ Dalaman 27 / 02 / 2019 Ụgbọ okporo ígwè bụ ebe pụrụ iche ebe mmetụta dị iche iche dị. Ha nwere ọṅụ dị ukwuu ka ha mezuru dị ka nkewa na mwute. Aka na-esi na windo nke ụgbọala ahụ eme ihe, nke na-eme ngwa ngwa mgbe ụgbọ ala ji nwayọọ nwayọọ malite ịmalite, na-agba ọsọ dị ka ụgbọ oloko na-akwụsị kpamkpam na njedebe nke ikpo okwu ... Ma akwụsịla ịkwanye ruo mgbe ụgbọ ala ahụ lara n'iyi ... Ana m eche ma ọ bụrụ na otu ụgbọ oloko anọtụbeghị Enwere ebe ụgbọ oloko ebe ọ na-enweghị? Ikekwe nke a bụ ọnọdụ pụrụ iche n'ụwa ... Ma ee, e nwere ọdụ dị otú ahụ. Nakwa na mba anyị, obodo dị mma nke Muğla ...
Enweghị m atụ anya ihe ọ bụla dị ngwa ngwa dị ka m tụrụ anya ya 30 / 05 / 2013 Enweghị m atụ anya ihe ọ bụla dịka m tụrụ anya na ụgbọ oloko ngwa ngwa bụ ofgbọ njem bụ otu n'ime ihe na-eme ka ọnụ ahịa na -eme ka akụnụba nke taa. Ndị na-achụ ego na-eburu n'uche ụdị njem dị iche iche na ọnụ ahịa nke ọnọdụ. Nke a bụ ihe mere ụlọ ọrụ na Turkey na West na karịsịa ịta na n'ọdụ ụgbọ mmiri n'obodo nke na-eduga mba nke ụwa .. Ọ bụghị naanị ibu, n'ezie, ndị na-eri na-akpata .. ụzọ ruru mgbe ejegharị ejegharị maka azụmahịa mkparita uka oge gafeworonụ "uru nke oge" mgbe na-ewere na okwu nke wụnye a na-eri na-apụghị ịtụ atụ site ego, ihe onwunwe ma ọ bụ ọrụ .. Ọzọkwa; Ọ ga-abụ ihe na-ezighi ezi ịtụle mmelite ọnọdụ ọnọdụ njem naanị na ntinye aka ya na ụgbọ njem ibu. Na usoro njem ọgbara ọhụrụ,…
Istanbul okporo ụzọ adịghị mgbe ọ dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ 01 / 01 / 2016 Istanbul okporo ụzọ adịghị mgbe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ: New Year ezumike 3 ụbọchị na n'ihi snow Istanbul bi na-ahapụ ụlọ, okporo ụzọ gbahapụrụ. Dika uzo di iche iche bu ihe efu, uzo ozo na uzo ozo na-akwusi ebe kariri 2 nde mmadu gara kwa ubochi. N'ihi ụbọchị 3 nke ememe Afọ Ọhụrụ na ndị Istanbul ahapụghị ụlọ ahụ n'ihi snow, Istanbul dara jụụ. Istanbul abughi akwukwo ohuru Na New Year's Eve, snow, traffic and density nke ndị nọ na Istanbul hapụrụ nkịtị na awa mbụ nke afọ ọhụrụ ahụ. Ụbọchị Afọ Ọhụrụ dabara na Friday na Saturday na Sunday, na-agbakwunye ndị ezumike nke Istanbul ndị mmadụ
Ịnọ na-echere Ferry na Izmir adịghị enwe obi ụtọ 17 / 11 / 2018 Ụgbọ njem ndị njem na-eji Izmir, mgbe ụfọdụ izute ihe ịtụnanya dị egwu. Dịka ihe nkiri "Young Stage" nke ndị Metropolitan Municipality haziri na ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri na ọdụ. N'ikpeazụ, ndị na-eto eto na-eto eto bụ ndị na-aga ebe dị na Alsancak Pier, kwuru na ndị njem ahụ hapụrụ ọrụ ahụ adịtụbeghị mma iji chere maka ụgbọ mmiri ahụ. N'ime ihe omume "Young Stage", İzmir Metropolitan Municipality na-ahazi ihe nkiri egwu na njem ụgbọ njem ọha na eze dịka ụgbọ mmiri, metro na ọdụ na ụlọ. Ndị otu, nke ụmụ akwụkwọ sitere na ngalaba ụlọ ọrụ na-egwu egwu na ngalaba egwú, na-eme oriri nke ndị music Izmir na-ahapụ mgbede na okwu bụ "A Short Break". N'ime ihe omume ahụ, ebe ndị na-eto eto na-eto eto weere ọnọdụ, oge a na Alsancak Ferry Port ...
Ebe a na-adọba ụgbọ ala Bayrampaşa
Imamoğlu Bayrampaşa Esenler Bus Station weere: 'Ọ dịghị onye nwere ike ịbanye ebe a'
Ebe a na-adọba ụgbọ ala Bayrampaşa Na-adọba ụgbọala ga-enwere onwe ya n'oge ememme
Onye ụkọchukwu AK Party Kayseri bụ Yasar Karayel, Kayseri, nke ga-agbatị ụgbọ okporo ígwè dị elu, kwuru na enweghi nsogbu.
Enweghị m atụ anya ihe ọ bụla dị ngwa ngwa dị ka m tụrụ anya ya
Istanbul okporo ụzọ adịghị mgbe ọ dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Ịnọ na-echere Ferry na Izmir adịghị enwe obi ụtọ